Home Wararka FARMAAJO iyo ROOBLE oo ka falceliyey doorashada Sheekh Aadan Madoobe
FARMAAJO iyo ROOBLE oo ka falceliyey doorashada Sheekh Aadan Madoobe
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Maxamed Xasan Rooble ayaa qoraallo kasoo saaray guusha xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Sheekh Aadan Madoobe) oo caawa loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka Soomaaliya. Hoos ka aqriso qoraalladooda.
Waxaan hambalyo iyo bogaadin diiran u dirayaa guddoomiyaha cusub ee Golaha Shacabka BJFS Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe oo caawa lagu doortay magaalo madaxda dalka ee Muqdisho.
Caawa waa habeen taariikhi ah oo umadda Soomaaliyeed sugayeen in muddo ah qeyb muhiim ahna ka ah dhammeystirka geeddi-socodka doorashada dalka.
Guddoomiyaha cusub ee Golaha Shacabka waxaan u rajeynayaa in uu eebbe u fududeeyo mas’uuliyadda culus ee loo doortay iyo in doorashada madaxweynaha dalka u maareeyaan si daah-furan, deg deg ah oo nabdoon, mas’uuliyaddaas oo ay la wadaaagaan guddoonka Aqalka Sare oo isagana la doortay.
Waxaa mahad leh Allaha weyn oo noo suurto-geliyay in howlshii adkeyd ee doorashadu soo gaartay heerkan gabo-gabada ah . Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guddoonkii KMG ahaa ee labada aqal, guddiyadii doorashada heerar-kooda kala duwan, ciidamada ammaanka Dalka iyo kuwa ATMIS, dowlad-goboleedyada dalka, beesha caalamka, shacabka Soomaaliyeed ee dulqaadka iyo taageerada nala garab joogay iyo cid kasta oo kaalin ku lahayd guushan la gaaray.
Previous articleTOOS: Doorashada Gudoomiyaha BFS oo hada ka socota xarunta Afasyooni
Next articleWaa kuma guddoomiyaha cusub ee Baarlamaanka 11-aad?
Alshabaab oo Qarax ku dishay Mas’uul ka tirsan maamulka K/Galbeed iyo...